शुन्य समय : 2014
मन फुरुंग भाको छ म के गरूँ ??
मन को कुरा तिम्रो मेरो उस्तै हुन थाल्यो अचेल
हाम्रो मन संगै मुटु दुरुस्तै हुन थाल्यो अचेल
धड्किन्छ ढक ढक तिम्रो तस्बिर देखेसी किन होला
सडेको होइन दिमाग मन फुरुक्कै हुन थाल्यो अचेल !!
प्रेशण गर्ने Basanta Subedi समय Monday, December 22, 2014
Labels: मुक्तक संग्रह, सृजना साहित्य
फ्लाइट नं : QR ६५१
समय : राति ९:३० बजे
कानै थर्किने गरि जहाज ले आवाज निकाल्दै काठमान्डू स्थित अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल बाट जमिन छोड्यो !
बानेस्वर मा रहेको म ! नसुन्ने कुरै भएन !
समय उही गते बार फरक तर मलाइ जहिले रात को साढे नौ बज्दा एकैपल्ट मुटु थर्किन्छ ! कारण यहि हो त्यहि भाडो जहिले त्यहि समय मा उड्ने पापी भाडो जसले मलाई र तिमीलाई हजारौ किलोमिटर टाढा पुर्याईदियो कहिले भेट्न नसक्ने गरि ! त्यहि कतार एयरवेज को जहाज जसले तिमीलाई र मलाइ रूहाउदै अलग पारिदियो !
फेसबुके चिनजान सुरुवात मैले नै गरेको थिएँ तिम्रो सुकोमल जवानी अनि बान्की परेको अनुहार मा लोभिएर ! सायद हुनु थियो त्यहि जुन हामीले बेहोर्नुपर्यो त्यसमा मै अपराधि ठहरिएँ ! आखिर केहि थिएन स्वतन्त्र साथि को साइनो त्यहि पनि फेसबुक मा ! तिम्रा हर तस्बिर मा मन अल्झिन थाले …आज एक भोलि दुइ अनि पर्सि तिन हुदै …कहिले घटेन बरु बढिरह्यो …साथ, सहयोग, भरोशा, अनि नजिकपन !
आफ्नै उल्झन मा उनिएकी तिमि अनि ब्यबहरिकता ले थिलथिलो म ! साइनो गहिरो मित्रताको अनि एक अर्काको एक्लोपन हटाउने बहाना ! फेसबुक च्याट ले पुगेन आवाज साट्न रहर भैदियो …अनि एकै झमट मा मन को कुनामा तरंगित हुन पुगेको सुमधुर तिम्रो आवाज अनि आफ्नोपन ले बाधिएको मेरो बोलीमा लठ्ठिएकि तिमि …थाहा छ पहिलो दिन मै हामीले झगडा गरेको ? कति मिठो झगडा है …मेरो मुख बाट निस्केको सुभ सब्द ‘बादरनी’ ..अनि तिमि कस्तरी रिसाएर फोन काटेकी ! अनि तिमीलाई मिठो लागेको हाम्रो बाझाबाझ ..चर्काचर्की नै परेको नि ..कल्पना गर त कति मिठो है !
त्यहि आवाज ले पछ्याई रह्यो ! सुन्न मन लागिरह्यो ! बोलु बोलु मात्र भैरह्यो ! सधै सधैको लागि !
अनि कति बहाना बनाउथ्यौ है ..आज मलाइ निन्द्रा लागेको छ क्या …भोलि कुरा गरौला नि हुन्न ? तिमीलाई सधै डर हुन्थ्यो न भोलि बोलिदिदैन कि …अनि अड्को ..भोलि ल ! अनि तिम्रो आवाज मा पौडी खेल्न आतुर म …भोलि कहिले टुट्न पाउथ्यो होला र ?
अनि थाहा छ हाम्रो प्रत्यक्ष भेट ! तिमि लज्जावती झार बनेकी ..अनि म ..म पनि तिमि जस्तै लजालु बनेको कि खै ….तर मुटु ढक ढक …झन्डै रोकिएको नि ……लागेथ्यो त्यो समय कहिले नसकियोस ..तर समय हाम्रो बस मा थिएन ! समय लाइ रोक्न सकिएन छेक्न सकिएन आफ्नै रफ्तार मा बहिरह्यो !
हुर्कदै गरेको प्रगति पथ तिम्रो लागि कति महत्वपूर्ण थियो अनि मेरो लागि चुनौती ! त्यहि प्रगतिपथ को मुना मैले निमोठ्न सकिन… तिम्रो हजारौ आग्रह लाइ आफ्नो सपना संग साट्न सकिन ! म संग सपना देख्ने अधिकार थियो तर सपना सजाउने हैसियत थिएन अनि तिम्रो भाग्य संग खेल्ने अधिकार मलाइ भाबिले लेखिदिएको थिएन ! म तिम्रो सुन्दर सपना भत्काउने अधिकार लिएर जन्मिन सकिन ..सायद भाग्यविधाता संग मेरो जन्म संग लेना देना थिएन ..लाग्छ यो संसार का दुख संग पौठेजोरी खेल्न मात्र मेरो आबस्यकता थियो !
आखिर त्यहि दिन जुन दिन तिमिले आसु बहाउदै म संग बिदा मागेकी थियौ ……मलाइ… नजाउ…भन्नुस..न प्लिज… ! अनि जहाज भित्र बाट अन्तिम पल्ट फोन गरेकी थियौ …..म तपाई …लाइ ..छोडेर ..गए ल …अनि म केवल हवस् ….मा नै अल्झिए राम्रो..संग…जाउ..ल ….त्यति बेला सम्म मा भुइँ मा थचक्क बसिसकेको थिएँ अनि मोबाइल भुइमा खसिसकेको थियो ….
प्रेशण गर्ने Basanta Subedi समय Sunday, December 21, 2014
Labels: सन्दर्भ लेख हरु, सृजना साहित्य
देश बिगारे नेता ले ..
लंका फेरिएर आज कतार भा' छ
देश निली सक्न नेता लाइ हतार भा' छ
पुर्बिया र पस्च्चिमे को के कुरा गरु खोइ
धर्म संस्कृति र पहिचान लतार पतार भा' छ !!
पियक्कड का कुरा बेग्लै
सकिन्छ दिनको उज्यालो अनि जब पर्छ रात
एक्लोपन ले घेर्दै ल्याउछ हुन्न साथि का बात
भनुन जसले पियक्कड वा अरु कुनै प्रतिक मिसाएर
प्याला माथि प्याला थपिन्छ अनि चढ्छ मात !!
आफै ठुलो नबन न ..
बसेका छौ समाज मा सुन्नुपर्छ सब का कुरा
अरुका नि हुन्छन मन बुझ्नुपर्छ सब का कुरा
एउटा मुख दुइटा कान त्यसै बनेका होइनन
आवेग को प्रेम होइन जान्नुपर्छ सब का कुरा !!
मान्छे मरेपछि कहा जान्छ ?
जिबन आफै मा के हो भनेर छुट्याउन सकिन्न ! ठुला ठुला दार्शनिक हरु पनि जिबन लाइ सदैब रहस्य कै रुप मा मान्दछन ! हामीलाई थाहा छ जिबन को सुरुवात बिज्ञान ले भने जस्तै क्रमिक बिकाश को प्रतिफल हो र पनि जिबन र मृत्यु को सन्दर्भ बहस गर्न लायक नै रहन्छ ! जिबन को अन्त्य संगै आत्मा को अन्त्य हुन्छ / हुन्न त्यो पनि रहस्य कै गर्भ मा छ ! संसार भर का प्राय को मन मा मृत्यु पछिको आत्मा संग जोडिने भ्रम या वास्तविकता ले जरो गाढेकै छ ! अत्यन्त बिकशित भनिने समुदाय वा समाज मा पनि मृत्यु पछिको आत्मा को सन्दर्भ चल्दछ !
अनेकौं दर्शन शास्त्र र धर्म शास्त्रहरू अनुसार आत्मा जीवनको एउटा अंग हो। मानव प्राणी जुन अलौकिक छन्,को मृत्यु पश्चात पनि आत्माको मृत्यु हुँदैन। विज्ञानले आज सम्म यस बारे केही पनि पतो लगाउन सकेको छैन, किन भनें आत्माको जाँचको लागि कुनै पनि नियन्त्रण मार्ग छैन। मृत्यु पश्चात के हुन्छ? भन्ने बारेमा धेरै प्रकारका अनेकौं मान्छेहरूका आफ्नो आफ्नो विचारहरू छन्। धेरै नास्तिकहरू भन्छन् आत्मा जस्तो कुनै वस्तु छैन, र ब्यक्तिको एकमात्र हिस्सा शरीर मात्र हो। -नेपाली विकिपीडियाबाट
साच्चै हुन्छ त भूत-प्रेत ?
भूतप्रेत धोकाका रूपमा देखिन्छ र त्यसमा मानवीय लक्षणको अभाव हुन्छ । त्यो हावा जस्तो हुन्छ जसलाई हातले छुन सकिदैन ।कुनै मानिसको भूत वायवी हुन्छ जसलाई देख्न सकिन्छ र कहिलेकाहिं कुनै बिशेष चाल या कुरा सुन्न सकिन्छ। यहाँ हामि रेवरेन्ड ‘डा. हेरिस’को भूतको उदाहरण दिनेछौं जो उनको मृत्यु पश्चात ‘एथिनियम लाईव्रेरी’मा आउने गर्थ्यो ।
प्रख्यात अमेरिकी उपन्यासकार ‘हार्थन’ धेरैजसो अध्ययन र शोधकार्यका लागी उक्त लाईव्रेरीमा जाने गर्थे ।उनले ‘डा. हेरिस’को भूतलाई त्यहाँ देखेका थिए ।उनले यो थाहा पाए कि ‘डा. हेरिस’ जुन कुर्सीमा बसेर उनको प्रिय पत्रिका बोस्टन पोष्ट पढ्थे; उनको भूत पनि त्यही कुर्सीमा बस्थ्यो ।
सुरुमा ‘हार्थन’लाई ‘हेरिस’ मरिसके भन्ने थाहा थिएन त्यसैले उनी त्यो भूतलाई मनुष्य ठान्थे । जब उनका एक मित्रले ‘हेरिस’को मृत्यु भईसकेको सुनाए तब उनि अचम्भित भए । यसो बिचार गर्दा ‘डा. हेरिस’का परिचित तथा नजिकका साथी समेत उक्त भूतसँग कुरा गर्दैनन् ।एक त लाईव्ररीको नियमले लाईव्रेरीमा बोल्न पाईदैनथ्यो तर लाईव्रेरीवाट बाहिर निस्किएपछि पनि कोहि बोल्दैनथ्यो।
मैलो लुगा लगाएको भूतको उदाहरण पनि रोचक छ । यो भूत क्वीन एनी र भिक्टोरिया कालमा लगातार देखिएको थियो ।इतिहासकार तथा नाट्यआलोचक डब्ल्यू. जे. मक्क्वीन पोपले यो भूतलाई अनेक पटक देखे र त्यो ब्यक्तिको चिनारी खोज्ने प्रयत्न गरे ।यो भूत धमिलो रंगको थियो ।कुल मिलाएर यो निर्णयमा पुगे कि यो कुनै यस्ता अभिनेताको भूत हो जो कुनै बिशेष दृश्यका निम्ति धमिलो रंगको लुगा लगाउँथे ।यो भूत लण्डनको डूरी लेनमा रहेको थिएटर रोयलमा २०० भन्दा धेरै बर्षसम्म देखिरह्यो ।यो स्पष्ट थियोकि भूतको त्यो थिएटरसँग कुनै बिशेष नाता थियो ।धेरैजसो यस्तो हुन्छ कि हामी कुनै बिशेष ब्याक्ति स्थान या बस्तुसँग धेरै जोडिन्छौं तब हाम्रो शरीरको अवशानपछि पनि हाम्रो आत्मा त्यो ब्यक्ति स्थान या बस्तुको वरिपरि भौतारीरहन्छ । यो एक स्वतः सिद्ध सिद्धान्त हो कि आत्मा कहिल्यै मर्दैन केवल हाम्रो शरीर मात्र मर्छ जब त्यसमा प्राण हुँदैन ।यो सहि हो कि कसैलाई थाहा छैन कि आत्मा कहाँ जान्छ या कसरी रहन्छ तर आत्माको अमरताको सिद्धान्त सबै धर्म र नैतिकताको आधारभुत सिद्धान्त हो ।जब यो आत्माले एक आकार धारण गरि आफ्ना प्रिय बस्तुको नजिकै आउँछ तब हामी त्यो छायाँलाई नै भूत भन्छौं । भूतको बारेमा आफ्ना कुरा सक्नुभन्दा पहिले हामि भूतप्रेत र मतिभ्रमको अन्तर स्पष्ट पारौं ।
कुनै बाहिरि प्रेरकको अभावमा जब हामिले कुनै कुरा देख्छौं तब त्यसलाई हामि मतिभ्रम भन्छौं ।यो यस्तो मानसिक स्थितिको द्योदक हो जुन भावनाको असामान्य अतिरेकबाट उत्पन्न हुन्छ ।यसमा कुनै एक भावना प्रवल हुनसक्छ जस्तो – भय क्रोध या प्रेम या एक भन्दा बढी भावनाको मिश्रणले पनि मतिभ्रम उत्पन्न गर्न सक्छ ।
एक नर्भस गृहणी बरण्डा या कोठामा चोरको चाल सुनेर धेरै जसो उठेर बस्नेछिन् । शेक्सपियरको म्याकवेथ नाटकमा म्याकवेथको दिमागमा रगतले लतपत भएको एक खन्जर यति स्पष्ट छ कि त्यसले मतिभ्रम उत्पन्न गरिदिन्छ र उनको मनमा डर भरिदिन्छ।
यसको बिपरित जब हामि कुनै भूत-प्रेतलाई देख्छौं तब हामीसमक्ष कुनै कुरा हुन्छ त्यसलाई अरु मानिसले पनि देख्न सक्छन् र यो हाम्रो इच्छाबिना नै बारम्बार देख्न सक्छौं ।
मतिभ्रम पुर्ण रूपमा ब्यक्तिनिष्ठ हुन्छ अरु मानिसले त्यसलाई देख्न सक्दैनन् । त्यसैले हामिले मतिभ्रम र भूत- प्रेतमा अन्तर गर्नुपर्छ र यी दुवैलाई अलग अलग बिषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
यहाँ हामि भूतप्रेतको बिषयलाई निम्न उद्दरणका साथ आफ्नो कुरा समाप्त गर्छौं – “बितेका १०० बर्षमा ब्रिटिश सोसाईटी फर साईकिकल रिसर्च र अन्य संस्थाद्वारा गरिएका अनेकौं अध्ययनका आधारमा – ‘के भूत-प्रेतको अस्तित्व छ?’ भन्ने आदिम प्रश्नको जबाफ ‘छ’ मा दिन सकिन्छ । भूतप्रेतको अस्तित्वको अनुभव गर्ने सैयौं सम्मानित मानिसहरूको साक्ष्यलाई आत्मभ्रम, झुठ या मिथ्या भनेर रद्द गरिदिनु एक दुराग्रह मात्र हुनेछ ।” -विश्व-प्रसिद्ध अनौठा रहस्य’ (सं. बिनिता पौडेल)
मानिसको शरीर तिन चिजले बनेको हुन्छ । ति हुन, भौतीक तत्वहरुले बनेका खम्बाहरु, आध्यात्मीकताको प्रवेशका कारण संवेदनशीलता र तेस्रो एउटा यस्तो अज्ञेय चिज छ, जसलाई हामी आत्मा भन्छौं । यी तीन चिजका बारेमा विज्ञानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ र आजभन्दा हजारौं वर्ष पहिले लेखिएको गरुण पुराणमा पनि यसबारेमा उल्लेख छ । यी तीन तत्वलाई बुझाउन आजसम्म धेरै प्रयास भएका छन् । सवै चिज बुझिसकेपछि पनि आत्मा र परमात्माको ‘कनेक्सन’ भने अहिलेसम्म कसैले बुझ्न सकेका छैनन् । आत्मा र परमात्माको पक्ष छोडिदिने हो भने मानव शरीर एउटा अनौठो भौतिक अवयव हो । कस्तो उच्च मेकनाइज्ड भने तपाईको मुटु चल्नैपर्छ, त्यसबाट रगतले मश्तीष्कमा अक्सीजन पु¥याउनुपर्छ र अनी मात्र मस्तिष्क चल्छ । त्यसो हुन सकेन भने मस्तिष्क चल्दैन र तपाईको शरीर बाँच्न सक्दैन । हरेक अंगको एउटा सन्तुलीत संचालन । यो एउटा सुसंगठीत भौतीक संरचना हो । तर यसलाई एउटा भौतिक संरचनाका रुपमा मात्र पनि हामीले हेर्नु हुदैन । यसभित्रको जुन आध्यात्मीक अंग छ, त्यसलाई आत्मा या जुनसुकै नाम दिउँ, त्यो रही रहन्छ । -डा. भोला रिजाल
भो ! गाला तिम्रा खुम्चिएसी बल्ल चाल पाउली !
जवानीले मात्तिएरै आँखा देख्न छोड्यौ अरे
साडी चोली थन्क्याएर वानपिस पो जोड्यौ अरे
बैसको त्यो उन्माद तिम्रो छचल्किदा आज पो
सुन्दैछु प्रेम सँग आफ्नो नाता तोड्यौ अरे !!
भौतिक रुप मा टाढा जादा
भौतिक रुप मा टाढा जादा भावनात्मक रुप मा पनि टाढा हुनु नि ! किन भौगोलिक दुरी को बाबजुत पनि सम्झना झन् झन् गाढा हुदै जाने होला ? म यहि कल्पना र परिकल्पनामा डुब्दा डुब्दै सुत्न सकिन ! प्रत्यक पल तिमि आउछौ , प्रत्यक समय तिमि आउछौ ! म आफै यो कुरा लाइ अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन ! प्रत्येक निन्द्रा लाइ बिगार्न र मलाई अझै पागल बनाउन अनि हर समय भौतारिन बाध्य बनाउने त्यो तिम्रो कुटनीति ! के अरु केहि नगरु म ! केवल तिमीलाई सम्झिरहू ?? कृपा गरेर मेरो सम्झना मा आउन छाडिदेउ न हुन्न र ?
Labels: भाबना/ बिचार, सृजना साहित्य
तिमि हाँसे संसार हास्छ
तिमि हाँसे संसार हास्छ रुदा एक्लै पर्छौ साथि
रमाइलो यो संसार मा आँसु किन छर्छौ साथि
भो आफु लाइ कमजोर बनाउने बानि नगर है
पिडा दिने लाइ माया को प्याला किन भर्छौ साथि !
जोडेको नाता किन पो तोड्यौ भन ए निष्ठुरी
टाढिनु रैछ किन पो जोड्यौ भन ए निष्ठुरी
विदेश मा रैछ सपना मिठो स्वदेशी तितो रे
मुटु लाइ जलाई किन पो छोड्यौ भन ए निष्ठुरी !!
खहरे को भेल बढ्दा …
खहरे मा भेल बढ्दा किनारा लाइ चाप बढ्छ
मन को माया टाढा हुदा मुटु भित्र ताप बढ्छ
तिम्रो खुसि रोजी आफ्नो खुसि हराइदिए मैले
बिर्सु भन्छु जति अझै तिम्रो लाह छाप बढ्छ !
रीजनशील हात र मन भएर के भो यहा
श्रीजनशील हात र मन भएर के भो यहा
मुटु धुजा धुजा भएपछी !
माया ले भरिएको आत्मा त थियो नि यहा
के गर्नु बिश्वास मृत भएपछी !
भो अब कुरै नगर यो स्वार्थि संसार को
तिमि हुनु र म नहुनु उस्तै भैदियो यहा
मेरो खुसि नै तिम्रा लागि बोझ भयपछी !!
“तिमीले भनेको भन्दा ठिक १५ सेकेन्ड ढिलो त आको हो नि”
“१५ सेकेन्ड रे ! म १ सेकेन्ड पनि कुर्न सक्दिन”
“नसक्दा के हुन्छ ?”
“मेरो राजा ! म तपाईलाई एक सेकेन्ड कुर्दा पनि सास रोकिन्छ ! भन्नुस म के गरौ ?”
“एक पटक सास रोकेर हेर न”
“मतलब मलाइ मर भन्नुभो ?”
“मर्छु ! अहिले नै मर्छु ! तर म हजुर को आखा बाट टाढा जान सक्दिन ! मलाइ हजुर को काख मै मर्ने अनुमति दिनुस”
“लाटी ! मलाइ के सोचेकी ?”
“एउटा पत्रकार ! माया को महत्व नबुझ्ने पत्रकार !”
“त्यसो भए म जाउँ ?”
“मैले समातेको छु र ?”
“तिमीले होइन तिम्रो मन ले समातेको छ काली !”
“मेरो मन तपाइको जिम्मामा छ ! आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्नुस !”
“ओके बाबा ! त्यसो भए कहा जाने ?”
“तपाइको खुसि जहा भन्नुहुन्छ !”
“टाढा हुन्छ ! बेलुका आउन अबेर हुन्छ !”
“कहिँ नजाउ ! यसो गरौँ ! चिडियाखाना जाउँ न तिम्रो साथीहरु को नियास्रो लागेको होला “
“त्यहा मेरो को साथि छ ?”
“छ नि त्यो तार को बार भित्र छन् नि अस्ति तिमीले बदाम दे’कि !”
“पुच्छर भाका तपाईका साथि हुन् भनेर पो बदाम खान दे’को”
“ओके बाबा ! सेम टु यु”
“ल ल ! भो अब बरु चोभार जाउँ ल ?”
“ओके मेरो राजा”
किर्तिपुर बाट फर्पिंग को बस चढेर चोभार पुग्न बढीमा २० मिनेट ! बस अत्यन्त भिड थियो ! काठमांडू बस्न थालेदेखि नै एउटा मोटरसाइकल को रहर गरेको कहिले नि सकिएन ! सधै को उही समस्या ! जहिले कोठा भाडा तिर्न पैसा नहुने ! हजुर्बा को पाला मा एउटा छाप्रो हालेर यता बसिदे’का भए नि कमसेकम आफ्नो घर त हुन्थ्यो नि ! असत्ति बुढा !
“ल ल ! चोभार झर्नुस”
कन्डक्टर भाइको आवाज ले झसङ्ग भएँ ! भिड मा पेलिएर संजु बस को पछाडी पो पुगीछिन ! म त कल्पना मै पो हराएछु !
मन्जुश्री गुफा मन्जुश्री ओढार जलबिनायक मन्दिर अनि त्यसको वरपर घुमिरहेका परेवा का बथान ! बागमती को हल्का नाक बिझाउने गन्ध अनि रंगी बिरंगी का केटा केटि हरु को भिड बाट निस्केको जात जात को परफ्युम को गन्ध बीच तालमेल नमिलेर अर्कै खाले वाक्क लाग्ने गन्ध बनेको !
“मलाइ त भोक लाग्यो ! केहि खुवाउनु हुन्न ?”
“यता नजिक को होटेल मा केहि छ कि ?”
“एस ! मो:मो !”
बरखी बारे जस्तो सेतो अनि भित्र अलि अलि मासु मिसिएको जस्तो स्वादिलो ! १० ओटा गनौटा डल्ला घाटि हुदै पेट सम्म को यात्रा मा रम्दै थिए !
खल्ती मा रहेको सानो ब्ल्याक एण्ड व्हाइट नोकिया बज्यो !
अफिस बाट रहेछ ! बिबेक जी तपाइँ तत्काल फर्पिंग पुग्नुस त्यहा जरुरि समाचार छ ! बोक्सी काण्ड को ! अरु को भन्दा अगाडी हाम्रो ब्रेकिंग न्युज बन्नु पर्छ !
नाइँ भन्न मिलेन !
“संजु ! म के गरौ”
आवाज आएन ! हिडेर सडक सम्म आइपुग्दै मा एउटा निलो पल्सर हाम्रो अगाडी रोकियो !
“ओ संजु ! तिमि यहा !”
संजुकै कलेज को साथि जेम्स थियो म चिन्दथें !
“घर जाने होइन ? ल हिड म पुर्याइदिन्छु”
संजु फटाफट बाइक को पछाडी बसिन ! पल्सर एकैछिन मा भन्ज्याङ्ग काटेर गाएब भयो !
म बस चढेर फर्पिंग पुगें ! हाकिम ले भनेजस्तै ब्रेकिंग न्युज हाम्रै पहिलो बन्यो ! अनि संजु संग को भेट अन्तिम !
बल्खु बाट पुरानो बस मा उभिएर चोभार सम्म गरेको यात्रा भन्दा चोभार बाट बल्खु हुदै सितापाइला सम्म धनि बाउ को छोरा जेम्स संग को मोटरसाइकल यात्रा अबस्य नै रोमान्चक थियो जुन यात्रा संजु को जिबन को गोल्डेन एंगल बनिदियो ! एउटा श्रमजीबी संग पुराना सिटि बस चढेर जिबन भर हिड्नुपर्ने सम्भाबना लाइ आजैको मिति बाट अन्त्य गरेको घोषणा गर्न १० शब्द को मोबाइल संदेश नै प्रयाप्त हुनेरहेछ !
२०७१/०५/२५ मध्य रात – बिर्तामोड नगरपालिका, झापा, नेपाल !
प्रेशण गर्ने Basanta Subedi समय Thursday, September 11, 2014
Labels: कथा सङ्ग्रह, समाज, सृजना साहित्य
आजकल प्राय साथि हरु ले सोध्नु हुन्छ मोबाइल कुन किन्दा उपयुक्त हुन्छ होला भनेर ! तसर्थ आज यो लेख मार्फत म कस्तो मोबाइल किन्ने बिषय मा केहि लेख्न जादै छु !
हामीले चलाउने गरेको मोबाइल फोन को इतिहास धेरै लामो छैन ! केहि बर्ष पहिले सम्म एक कल फोन को लागि घन्टौ धाउनु पर्ने र त्यहि पनि भनेको बेला उपलब्ध नहुने थियो तर आज हामि प्राय को हात मा हाते फोन अर्थात मोबाइल को उपलब्धता रहेको छ ! संचार को क्षेत्र मा भएको अत्यन्त द्रुततर बिकाश संगै मोबाइल फोन बिभिन्न रुप र आकार अनि क्षमता अनुसार निर्माण भएका छन् !
नाम तथा ब्रान्ड का कुरा गर्नु पर्दा बजार मा नोकिया, साम्सुङ्, ब्ल्याक्बेरी, एचटिसी, एप्पल को आइफोन का साथसाथै कलर्स, मोटोरोला, एलजी, माइक्रोम्याक्स लागायत दर्जनौ कम्पनि तथा ब्राण्ड का मोबाइल हरु आफ्नो बजेट र आबस्यकता अनुसार किन्न सकिन्छ !
सबै भन्दा पहिले तपाइँ मोबाइल फोन कुन प्रयोजन को लागि बोक्नुहुन्छ, के चलाउनुहुन्छ, तपाइको रुची अनि बजेट अनुसार मोबाइल को छनोट गर्नु पर्दछ ! तपाइँ सामान्यतया कुराकानी गर्न को लागि मात्र मोबाइल बोक्नु पर्छ भने तपाइले खासै अरु सुबिधा नभएको साधारण सेट प्रयोग गर्नु पर्छ ! यसको लागि तपाइले बजार मा बिभिन्न किसिम का साधारण सेट हरु पाउनु हुन्छ ! हामि केहि समय अगाडी सम्म नोकिया का सामान्य सेट हरु प्रयोग गर्दथ्यौ जसमा ब्याट्री ब्याकअप राम्रो हुनु को साथै नेटवर्क राम्रो दिने एक पटक चार्ज गरेसी २/३ दिन सम्म गर्नु नपर्ने जस्ता सकारात्मक कुरा रहने गर्छन तर त्यसमा तपाइँ इन्टरनेट चलाउन ईमेल गर्न चै सक्नुहुन्न केवल फोन उठाउन फोन गर्न तथा मेसेज गर्न मात्र सक्नुहुन्छ ! अब जमाना फेरिएको छ हात मै भएको मोबाइल बाट नेट चलाउदै हामि दुनियाको खबर एकै छिन मा थाहा पाउन सक्ने भएका छौ ! मोबाइल बाटै नेट चलाउन को लागि हामीले साधारण सेट भन्दा माथि रहेर लगानी गर्नु पर्छ ! मतलब अलिक महंगा सेट हरु प्रयोग गर्नुपर्दछ ! र त्यति मात्र नभएर तपाइँ कुन प्रकृति को नेट चलाउनुहुन्छ त्यहि अनुसार सेट खरिद गर्नु पर्छ ! आदि तपाइँ सिम बाट जिपिआरएस प्रविधिमा नेट चलाउनुहुन्छ भने सामान्य तबर का सिम्बियन वा जाभा मोबाइल हरु चलाउन सक्नुहुन्छ !
आजकल प्रयोग मा आउने ३ जि नेटवर्क बाट नेट चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाइले ३ जि नेटवर्क भएकै सेट खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ जुन २ जी भन्दा केहि महँगो पर्न जान्छ ! र अझै तपाइँ वाइफाई नेटवर्क मा नेट चलाउनुहुन्छ भने तपाइले त्यसको लागि अझै धेरै लगानी गर्नु पर्दछ ! तर त्यसो भन्दै मा आत्तिहाल्नु पर्दैन आजकल निकै सस्तो मुल्य मा वाइफाई चल्ने स्मार्ट फोन हरु किन्न सकिन्छ !
Labels: अध्ययन/अनुसन्धान, सन्दर्भ लेख हरु
यो गजल मिति २०६५/०९/१७ मा चापागाउ ललितपुर मा रहदा लेखेको थिए ! डाएरी मै अल्झेको थियो आज सार्बजनिक गर्ने मेसो बनाएको छु ! गजल लाइ बाचन गरि आफ्नो अमुल्य सुझाब अनि माया प्रदान गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु ! मेरो गजल सुरु हुन्छ यसरि :-
मेरो जिबन लाइ तिम्ले खालि बनायौ
माया दिने मन लाइ लौ जाली बनायौ !!
चोखो मन को सधै किन गर्छौ बखान
प्रेम का शब्द हरु तिम्ले गालि बनायौ !!
हराभरा भइ मैले फुल बन्न खोज्दा
बतास ल्याई भाचिएको डाली बनायौ !!
पवित्र नाता जोडी जुनी बिताउ भन्दा
अर्कैलाई तिम्ले दिलको माली बनायौ !!
शब्दमा भनिदियौ तिम्रै साथ मा बाच्छु
जिबन अर्कैको हालीमुहाली बनायौ !!
Labels: गजल सङ्ग्रह, सृजना साहित्य
तीज हिन्दू नारीहरूले मनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो। यो चाड भाद्र शुक्ल द्वीतिया देखि पञ्चमी सम्म ४ दिन मनाइन्छ। तीजमा भगवान शिवको आराधना गरिनुका साथसाथै नाचगान मनोरञ्जन समेत गर्ने गरिन्छ। नेपाली हिन्दू महिलाहरूद्वारा स्वतन्त्र र आनन्दमय रूपमा मनाइने तीज अन्य धर्म र जातजातिका नेपाली महिलाहरूले पनि हर्षोल्लासका साथ मनाउन थालेका छन् ।
यो पर्व मुख्य रूपले नेपालभर मनाईन्छ भने भारतका कुनै कुनै प्रान्तमा मनाइन्छ। भनिन्छ आद्य शक्ति भगवानशिवकी अर्धाङ्गीनी हिमालय पुत्री पार्वतीले भगवान शिवको स्वास्थ्य तथा शरीरमा कुनै वाधा उत्पन्न नहोस् भनेर पहिलो ब्रत राखेकि थिईन् त्यो दिन यहि हरितालिका तिजको दिन थियो त्यसै दिन आजसम्म हिन्दु नारीहरूले यो पर्व मनाउदै आएका छन् ।
यो चाडमा माइतीले (बाबु आमा,दाजुभाइ) छोरी/चेली लाई घरमा बोलाएर मीठा-मीठा परिकार ख्वाउँने तथा मनका भावना एवं सुखदुख साटासाट गरी एउटै ठाउँमा खाने-बस्ने चलन छ । यस दिन विशेष महत्वकासाथ दर खाने गरिन्छ। यहि दर खाने दिन बाट नै तिज पर्वको आरम्भ भएको मानिन्छ। दरमा खीर, ढकने वा सेलरोटी, केरा आदि अथवा ठाँउ अनुसार विभिन्न मिठा-मिठा परिकार खाने गरिन्छ। तर आधुनिकता सँगसँगै यसमा खाइने परिकारमा परिवर्तन आउँदै गएको छ। सामान्यतया दर मध्यरात १२ बजेअघि खाने चलन बसिसकेको छ। भोलिपल्ट दिनभर पानी सम्म पनि नखाई बस्नुपर्ने भएकोले दर खाने दिन राती ढीलासम्म बसेर पेटभरी खाने प्रचलन बसेको हो।
तीजको दिनका अतिरिक्त गणेश चतुर्थी र ऋषिपञ्चमी लाई पनि तीज पर्वकै रूपमा मनाइन्छ । खास गरी यसमा स्त्रीहरूले पतिको निमित्त निराहार रहेर भगवान शिव तथा आद्य शक्ति पार्वती सँग प्रार्थना गर्दछन् । यो दिन महिलाहरु विहान चाँडै उठी नुहाई धुवाई गरेर दिनभरी जल अन्न ग्रहण नगरी ब्रत बस्ने गदैछन । बेलुकी पख घर टोल र छिमेकका महिलाहरु भेला भई पूजाका सामान तथा मण्डप तयार गरी भगवान शिवको आराधना गर्ने प्रचलन रहेको छ । निर्जला ब्रत भनिएपनि आजभोली महिलाहरु मध्यान्हमै पुजा आराधना पश्चात फलफूल ग्रहण गर्ने गर्दछन । कतिपय महिलाहरु नजीक रहेको शिवमन्दिरमा गई शिव आराधनाका साथै नाच गान तथा रमाईलो गर्ने गर्दछन् । काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महिला ब्रतालुहरुको ठूलो भीड हुने गर्दछ ।
हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ अनुसार राजा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको कन्यादान भगवान विष्णुसँग गरिदिने वचन पार्वतीलाई मन नपरे पछि आफूले मन पराएको वर पाउन जङ्गल गएर शिवजीको तपस्या गर्न थालिन्। पार्वतीले तपस्या गरेको एक सय वर्ष पूरा भइ सक्दा पनि आफूले गरेको तपस्याको फल नपाउँदा एक दिन उनले शिव लिङ्गको स्थापना गरी पानी पनि नपिईकन निराहार व्रत बस्न बसिन्। यसरी पार्वतीको कठोर व्रतको कारण शिवजी प्रकट भई ‘चिताएको कुरा पुगोस्’ भनी आशिर्वाद दिए पछि शिव पार्वतीको विवाह हुन पुग्यो। त्यो दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन थियो। सोही तिथीदेखि हिन्दू नारीहरूले यस दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउन थाले र यो तीजको रूपमा मनाउने चलन पौराणिक कालदेखि चल्दै आएको मानिन्छ।
हाम्रो समाजमा तीज महिलाहरूद्वारा मनाइने एउटा पर्व हो। आधुनिक समाजमा तीजको महत्वलाई जुनरूपले व्याख्या गरिए पनि यो एक पौराणिक कालदेखि चलिआएको परम्परा हो। सृष्टि र समाज चल्नको लागि पूर्वीय मान्यता अनुसार महिलाहरू विवाह पश्चात् आफ्नो श्रीमानको साथमा उसको घरमा बसी बाँकी जीवन बिताउनु पर्ने हुन्छ। यसरी आफू जन्मेको घर, माता,पिता, भाइबहिनी, इष्टमित्र र समाज चटक्क छोडी पराइघरमा जीवन विताउँदा आउने माइतिको यादलाई कमी गर्ने एउटा अवसरको रूपमा तीज पर्वको गहन महत्व रहेको छ। तीजमा महिलाहरूलाई मीठा मीठा भोजनका परिकारहरू खुवाइन्छ, नयाँ लुगा कपडा दिइन्छ । महिलाहरूलाई पराइघरको विभिन्न जिम्मेवारी, तनाव, साथै माइतीको सम्झनाको खाडललाई कम गर्न यो पर्वको ठूलो भूमिका रहेको छ। तीजमा विवाहिता महिलाहरू आफ्ना पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत बसी नाचगान र मनोरञ्जन गर्छन् भने अविवाहिता सुयोग्य वरको आशा राखी व्रत बस्छन्। ब्रतको समयमा महिलाहरूले तीजको ब्रतकथा सुन्ने र समापनमा पूजा लगाई ब्राह्मणब्राह्मणीहरूलाई दान दक्षिणा गर्ने चलन रहेको छ। तीजको व्रत अन्य व्रत भन्दा फरक ढंगले लिइन्छ। यस दिन पानीसम्म पनि नखाई ब्रत बस्नुपर्ने परम्परागत मान्यता रहेको भएपनि कतिपय महिलाहरु महादेवको पुजा आराधना पश्चात फलफुल ग्रहण गर्दछन् । यसै दिन पार्वतीले आफ्नो तपस्या पूरा गरी शिवजी पाएको विश्वास गरिने हुनाले यस दिनलाई हर्षोल्लासका साथ नाचगान गरी मनाइने गरिन्छ।
पौराणिक कालदेखि चलिआएको तीजको ब्रतकथा यसप्रकार रहेको छ। यो ब्रतको महात्म्यको कथा भगवान शिवले पार्वतीजीको पूर्वजन्मको स्मरण गराउने उद्देश्यले यसप्रकार भन्नु भएको थियो। हे गौरी ! पर्वतराज हिमालयको घर अर्थात तिम्रो माइतमा बस्दा गंगातटमा तिमीले आफ्नो बाल्यावस्थामा अधोमुखी भई घोर तपस्या गरेकी थियौ। उक्त अवधिमा तिमीले कुनै अन्नपानी नखाई केवल हावाको मात्र सेवन गरेकी थियौ र मात्र सुख्खा पत्ताहरू चबाई दिनहरू काटेकी थियौ। माघको चिसोमा तिमीले निरन्तर जलमा प्रवेशगरी तप गर्यौ, बैशाखको शरीर जलाउने गर्मीमा पञ्चाग्निद्वारा शरीर तपायौ। साउनको मुसलधारे वर्षामा खुल्ला आकाशमुनि बिना अन्नपानी व्यतीत गर्यौ। तिम्रो यो कष्टदायक तपस्या देखेर तिम्रा पिता धेरै दुःखी र चिन्तित हुने गर्दथे। तब एकदिन तिम्रो तपस्या तथा तिम्रा पिताजीको दुःख र चिन्तालाई मनन गरी नारदजीले तिम्रा घरमा आउनुभयो। तिम्रा पिताले नारदजीलाई घर आउनाको कारण सोध्नुभयो र प्रत्युत्तरमा नारदजीले भन्नुभयो “ हे गिरिराज ! म भगवान विष्णुले पठाएर यहाँ आएको हुँ। तपाईँकी छोरीको घोर तपस्याबाट प्रसन्न भई स्वयं भगवान विष्णु उनीसँग विवाह गर्न चाहनुहुन्छ। यसबारे म तपाईंँको राय जान्न चाहन्छु।” नारदजीका कुरा सुनेर तिम्रा पिताले अति प्रसन्नताकासाथ भन्नु भयो। श्रीमान् यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्याकासाथ वरण गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई कुनै आपत्ति छैन। उहाँ त साक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ। यो त हरेक अभिभावकको पिताको इच्छा हुन्छ कि उसकी छोरी सुखसंम्पदाले परिपूर्ण पतिका घरकी गृहलक्ष्मी बनून् र आफ्नो जीवनसाथै पति र परिवारको सुखकी कारण बनून्। नारदजीले तिम्रा पिताको स्वीकृति पाएपछि भगवान विष्णुसमक्ष गई विवाह टुङ्गो लागेको समाचार सुनाउनु भयो। तर विष्णुसँग आफ्नो विवाह हुन लागेको थाहा पाएपछि तिमी असाध्यै दुःखित भयौ। तिम्रो दुःखको कुनै ठेगान भएन। अति दुःख, चिन्ता र कष्टमा तिम्रा दिनहरू बित्न थाले।
तिम्रो चिन्तित र दयनीय मुहार देखेर तिम्री एउटी सखीले तिम्रो दुःखको कारण सोद्धा तिमीले भन्यौ -’मैले मनैदेखि भगवान शिवलाई वरण गरेकी छु, तर मेरा पिताले मेरो विवाह विष्णुजीसँग गरिदिने निधो गर्नुभयो। म विचित्र धर्मसङ्कटमा छु। अव मैले प्राण त्याग्नुबाहेक कुनै उपाय र विकल्प देखेकी छैन।’ तिम्री ती सःगिनी अति नै चङ्ख र समझदार थिइन्। उनले तिमीलाई भनिन् – ‘प्राण नै त्याग गर्नुपर्ने यहाँ के नै कारण छ र? संकटको घडिमा धैर्यताका साथ काम गर्नुपर्दछ। हिन्दूनारीको जीवनको सार्थकता नै केमा छ भने जसलाई मनैले पतिका रूपमा एक पटक वरण गरिन्छ, उसैसँग निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह गर्नुपर्दछ। दीगो आस्था र एक निष्ठाका सामु त स्वयं भगवान पनि असहाय र किंकर्तविमुढ बन्न पुग्नुहुन्छ। तसर्थ म तिमीलाई घनघोर वनमा लैजान्छु जुन साधनास्थल पनि हो र त्यहाँ तिम्रा पिताले समेत तिमीलाई खोजेर पाउनुहुन्न। मलाई पूर्ण विश्वास छ ईश्वरले अवश्य तिम्रो सहायता गर्नुहुनेछ।’ अनि तिमीले तिम्री सहेलीले भने झैँ गर्यौ। यता तिम्रा पिता तिमीलाई घरमा नदेखेपछि धेरै चिन्तित र दुःखी हुनुभयो। उहाँ सोच्न थाल्नुभयो – ‘मैले त मेरी पुत्रीको भगवान विष्णुसँग विवाहको निधो गरेको थिएँ, भगवान विष्णु विवाहका निमित्त जन्ती लिएर आउनुभएका बखतमा कन्यालाई घरमा नभेट्दा अनर्थ हुन जानेछ, विष्णुलाई मैले के जवाफ दिने?’ यती विचार गरी तिम्रा पिताले चारैतिर तिम्रो खोजीको कार्य शुरु गराउनुभयो। यता तिम्रो धुमधामसँग खोजीकार्य भइरह्यो उता तिमी आफ्नी सहेलीका साथ नदीका तटमा एउटा गुफामा आराधनामा लीन भयौ। भाद्रपद शुक्लको तृतीया तिथि, अनि त्यस दिन हस्ता नक्षत्र थियो, त्यसदिन तिमीले बालुवाको शिवलिङ्ग निर्माण गर्यौ। रातभरि मेरा स्तुतिमा गीत गाउँदै जागरण गर्यौ। तिम्रो यो कठोर तपस्याको प्रभावले मेरो आसन हल्लिन पुग्यो र शीघ्र तिम्रा सामूमा पुगेँ र तिमिलाई वर माग्न भनेँ।
त्यससमय आफ्नो तपस्याको फलका प्रभावले प्रकट भएको म महादेवलाई आफूसमक्ष देखेर तिमीले भन्यौ – ‘मैले हजुरलाई साँचो मनले पतिका रूपमा वरण गरिसकेकी छु। यदि तपाई साँच्चै नै मेरो तपस्याबाट प्रसन्न भई यहाँ प्रकट हुनुभएको हो भने मलाई आफ्नी अर्धाङ्गिनीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। त्यसपछि “तथास्त्” भनेर म कैलाश पर्वततर्फ फिर्ता भएँ। भोलिपल्ट उज्यालो हुने बितिक्कै तिमीले पूजाका समस्त सामाग्री नदीमा सेलाई आफ्नी सहेलीसहित व्रतको समापन गर्यौ। त्यही समय तिम्रा पिता गिरिराज आफ्ना बन्धुबान्धवसहित तिमीलाई खोज्दै खोज्दै त्यहीँ पुग्नुभयो। तिम्रा पिताले तिम्रो अवस्था देखेर अत्यन्त दुःखी हुँदै तिम्रो त्यो कठोर तपस्याको कारण सोध्नुभयो। तिमीले भन्यौ – ‘पिताजी ! मैले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय कठोर तपस्यामा विताएँ। मेरो यो तपस्याको एकमात्र उद्देश्य माहादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्नु थियो। आज म आफ्नो तपस्याको परीक्षामा सफल भएकी छु। म आफ्नो आराध्यको खोजीमा घरबाट निस्किएर हिँडेकी हुँ। अब मैले हजुरसँग घर नै फर्कनु पर्छ भने महादेवका साथ मेरो विवाह गरिदिने भए मात्र म घर फर्कन्छु। तिम्रा कुरा सुनेर पिता हिमालयले तिम्रो इच्छा स्वीकार गर्नुभयो र तिमीलाई घर फिर्ता लिएर जानुभयो। केहीसमय पछि उहाँले पुरा विधिविधान सहित हाम्रो विवाह गरिदिनु भयो। भगवान शिवले अझ भन्नुभयो – हे पार्वती ! भाद्रपदको शुक्ल तृतीयामा तिमीले मेरो आराधना गरी जुन ब्रत बसेकी थियौ, त्यसैको परिणामस्वरूप हामी दुईको विवाह सम्भव भएको हो। यो ब्रतको महत्व यसकारणले पनि महत्वपूर्ण छ। जसले यो ब्रत निष्ठापूर्वक पालन गर्दछ, त्यसलाई मनोवाञ्छित फल प्राप्त हुनेछ। यो ब्रतलाई हरितालिका भन्नुको अर्थ पनि पार्वतीलाई साथीहरूले पिता र आफ्नो प्रदेशबाट हरण गरी जंगलमा लगेको प्रसङ्गसँग जोडिन्छ। हरितालिका शब्दमा रहेका हरिता र आलिका यी दुई शब्दको अर्थ पनि क्रमशः हरण गरिएकी र सथीहरू भन्ने हुन्छ। भगवान शिवले पार्वतीजीलाई भन्नुभयो – यस व्रतलाई विधिविधानपूर्वक जसले लिन्छ, त्यसले तिम्रोजस्तै सुयोग्य र अचल श्रीमान् प्राप्त गर्दछ।
हाम्रो समाजमा तीज महिलाहरूले मनाउने एउटा महत्वपूर्ण पर्व हो। आधुनिक समाजमा तीजको महत्वलाई जुनरूपले व्याख्या गरिए पनि यो एक पौराणिक कालदेखि चलिआएको परम्परा हो। सृष्टि र समाज चल्नको लागि पूर्वीय मान्यता अनुसार महिलाहरू विवाह पश्चात आफ्नो श्रीमानको घरमा बसी बाँकी जीवन विताउनु पर्नेहुन्छ। यसरी आफू जन्मेको घर, मातापिता, भाइबहिनी, इष्टमित्र र समाज चटक्क छोडी पराइघरमा जीवन विताउँदा आउने माइतीको यादलाई कमी गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा तीजपर्वको गहन महत्व रहेको छ। तीजमा महिलाहरूलाई मीठा मीठा भोजनका परिकारहरू खुवाइन्छ, नयाँ लुगा कपडा दिइन्छ। महिलाहरूलाइ पराइघरको विभिन्न जिम्मेवारी, तनाव, साथै माइतीको सम्झनाको खाडललाई कम गर्न यो पर्वको ठूलो भूमिका रहेको छ। तीजमा विवाहिता महिलाहरू आफ्नो लोग्नेको दीर्घायुको कामना गर्दै व्रत वसी नाचगान र मनोरञ्जन गर्छन भने अविवाहिताहरू सुयोग्य वरको आशा राखी ब्रत बस्छन। ब्रतको समयमा महिलाहरूले तीजको ब्रतकथा सुन्ने र समापनमा पूजा लगाई ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूलाई दानदक्षिणा गर्ने चलन रहेको छ।
शास्त्रअनुसार १२ महिनाको रजस्वलामा अन्जानवस कति कुरा छोइएको हुन सक्छ। उक्त पापबाट मूक्त हुन भाद्र शुक्ल पञ्चमीको दिन ३६५ वटा दतिवन तोकी माटो तथा गाईको गोबर लगाएर ३६५ पटक नुहाउनु पर्छ र यसको पनि थुप्रै विधिहरू छन। तर मूलतः ३६५ वटा दतिवनका डाँठ तोकेर खोलामा बगाउनु, माटो र गोबरले शरीरका सबै अंगहरू सुद्ध गर्नु, चाल्नीमा गनौती (गनिएका तिलचामल र जौ) राखेर माथिबाट पानी खन्याई छानिएको पानीले नुहाउनु र सप्तऋषीको पूजा गरेपछि महिलाहरू पूर्णरूपमा सुद्ध हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने तीज आफैंमा एक सुन्दर पर्व हो र यसलाई व्रतमा परिणत भएको भए पनि फलफूल ग्रहण गरेर दिनभरि बस्नमा पनि वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा फलदायक नै देखिन्छ। नारीहरूले रातो टीका रातो कपडा, रातो चुरा, पोते आदि सबै रातै रंगमा सजिनु तीज पर्वको रंग हो। नारीहरू त्यस दिन नाचगान गर्दै हर्षोल्लासकासाथ दिनभरि भोकै बसी श्रीमानको दिर्घायुको कामना गर्नु नै विशेष यस तीज पर्वको सन्देश मानिन्छ।
तीज व्रतको दिन घरको कामकाजलाई चटक्क छोडेर नेपाली महिलाहरू स्वतन्त्र तथा हषिर्त भएर घर बाहिर निस्कन्छन्। उनीहरूको गीतमा आफ्ना अधिकार तथा वेदनाका कुराहरू समेटिएका हुन्छन्। यसले महिलाहरूलाई सशक्त बनाउँछ। यी कुराहरू तीजको सकरात्मक पक्ष हो।
हाल विदेशमा रहेका नेपाली महिलाहरूले पनि यो चाड बडो धुमधामकासाथ मनाउने गरेको पाइन्छ।
सन्दर्भ श्रोत: विकिपेडिया
Labels: सन्दर्भ लेख हरु
ताप्लेजुङ् स्थित पाथिभरा तिर्थ जाने क्रम मा २०७० बैशाख १ गते
प्रेशण गर्ने Basanta Subedi समय Friday, April 11, 2014
Labels: घुमफिर/ यात्रा
ताप्लेजुङ् स्थित पाथिभरा तिर्थ जाने क्रम मा २०७० ब...